हामी बिरामी किन हुन्छौँ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
हामी बिरामी किन हुन्छौँ?
पुस २५, २०७५ डा. ललितकुमार मिश्र
काठमाडौँ — केही दिन अगाडिको कुरो हो, एउटा स्कुलको स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी गोष्ठी मा सहभागी हुन पुगेको थिएँ । स्वास्थ्य सम्बन्धी वक्तव्य दिने क्रममा एक जना कक्षा १० मा पढ्ने बालिकाले प्रश्न गरिन्, डाक्टर साहब, हामी बिरामी किन हुन्छौ ?
कुरो त ठिकै हो, हवाई डू वी फल सिक ? राम्रै प्रश्न गरेकी थिइन ती बालिकाले । आज यही विषयवस्तुलाई लिएर कलम चलाउने प्रयास गर्दै छु । हामी सबै बेला बखत बाहिर जान्छौ र बाहिर खाना खान्छौ । साथी भाइहरूसँग भेटघाट गर्न जान्छौँ, भिन्न भनिनै ठाउँहरूमा सँगै घुम्न जान्छौँ । त्यहाँ पाइने विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट खानेकुराहरूको स्वाद लिन्छौँ । यसै क्रममा कसैलाई बाहिर खाना खाएपछि पेट खराब भइहाल्छ भने कसैलाई नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यहाँको वातावरण मिल्दैन र बिरामी पर्छ ।
यहाँ प्रश्न यो आउँछ, किन यस्तो हुन्छ? हामी बिरामी हुनलाई दुई वटा आधारले काम गर्दछ । एउटा आफै भित्र छ र अर्को बाहिरी वातावरणमा आधारित छ । हामी भित्रकै कारण र बाहिरको कारण । यी दुवै कारणलाई गहिरिएर बिचार गर्‍यौ भने थाहा पाउने छौँ, यी दुई बिचको अन्तर सम्बन्ध । हामी किन बिरामी हुन्छौ ? हामी सबै बाहिर जान्छौ र बाहिर कुनै होटेल या रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छौ । मलाई त मज्जा लाग्छ, फरक फरक चिजहरू ट्राई गर्नमा । मलाई लाग्छ, पक्कै पनि हरूलाई पनि राम्रो लाग्छ होला । बर्खाको याममा पानीमा रुझ्न पनि राम्रो लाग्छ । हामी सबै पानी परेको बेला कुनै न कुने रूपमा थोर बहुत भिजेकै हुन्छौँ । कोही त निथ्रुक्क पानीले भिजेका पनि हुन्छन्, त्यसमा पनि आफ्नै आनन्द छ ।
यसै गरी जाडोको याममा पनि हिउँ परेको हेर्न र हिउँमा खेल्न जान्छौँ, खेल्छौँ । राती ढिलोसँग पार्टीमा जाने पनि चलन हुन्छ । बिहे भोजमा जान्छौ, अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन्छौँ । यस प्रकारले हामी भिन्न-भिन्न कार्यक्रमहरू पुग्छौँ, धेरै मानिसहरूसँग भेटघाट गर्‍छौं । हामी मध्ये केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् । जो अफिसको समय बाहेक पनि अफिसमा काम गरिरहन्छौँ । बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्टमा पनि काम गरिरहेका हुन्छौँ । हामी सबैको वरिपरि जीव – जन्तुहरूको पनि बास छ । हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, यहाँको हावा यति स्वच्छ र सफा छ कि जीव-जन्तुहरूमा कुनै कम्पिटिसन नै छैन । प्रत्येकले भरपुर स्कोप भेट्छन्, जीव–जन्तुहरूसँग सम्पर्कमा पुग्नको लागि ।
हामी सबै यही वातावरणमा बस्छौँ, यही हावामा श्वास लिन्छौँ । त्यहीका पानी पिउँछौँ । हरेक चिज हामी सबैले गर्छौँ । तर त्यसै मध्ये कसैको पेट खराब भइहाल्छ । कसैलाई आँखा पाक्ने रोग लाग्छ । अर्कोलाई अरू नै केही थोकको गडबडी हुन्छ । यसरी नै बर्खामा पानीमा भिजेकाहरू, हिउँमा खेलकाहरु मध्ये कसै कसैलाई पोस्ट सिजनल बायरल ईन्फेक्सन हुन्छ । सबैलाई हुँदैन । यस्तो किन हुन्छ? हामी मध्ये कसैलाई हुन्छ कसैलाई हुँदैन । यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा लगातार घुमिरहन्छ । अरूलाई केही भएन, मेरै पेट किन खराब भयो? मलाई नै किन भाईरल फिवर आयो ? यी सबै बाहिरका कारण हुन्, बाहिरको कारणले सबैलाई ईफेक्ट गरिरहेको छैन । हामी मध्ये केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रभावित बनाइरहेको छ ।
यस प्रश्नको उत्तरका लागि हामीले आफैभित्र हेर्नु पर्ने हुन्छ । के कारणले यो समस्या आइरहेको छ । ममा के कमी कमजोरी छ? जसले गर्दा मलाई मात्र समस्या भइरहेको छ । बाहिरको अवस्थालाई राम्रो बनाउनको लागी धेरै प्रयास गरिएको छ । अचेल होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरू हाईजिनको स्तर बढाइएको छ । पानी पुरी बेच्नेले पनि हातमा ग्लोव लगाएर काम गर्छ । मेडिकल फेसिलिटी पनि राम्रो छ । रोगबाट बच्न भेक्सिनेसन गराउँछौ । भिन्न भिन्न प्रकारका खोपले रोगबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल / नर्सिङ होमहरूमा राम्रो उपचार सेवा पाइन्छ । यस प्रकार अरू धेरै विकल्पहरू पनि छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामी किन बिरामी हुन्छौ? हामी कहाँ बिरामीको कमी त छैन । बिरामी आई नै रहेका छन् ।
कुन प्रकारका र कस्ता बिरामीहरू आइरहेका छन्? अचेल विशिष्ट प्रकारका बिरामीहरू बढिहरेका छन् । जस्तै, कसैलाई पोलन एलर्जी, कसलाई सन एलर्जी, गुलुटोन (गहुँ) को एलर्जी, डस्टएलर्जी, स्किन एलर्जी भइरहेको छ । सबैलाई त हुँदैन । मानौँ एलर्जी हुनु अचेल फेशन नै भइसकेको छ । धरै जसो केटाकेटीहरू या वयस्कहरूमा एलर्जी देखिइरहेको छ । यसको साथै धेरै मानिसहरूमा अटोईमिनो कम्पलेन बढिरहेको छ । अटोईम्युनोको मतलब तपाईँको शरीरले स्वयंमा समस्या उत्पन्न गराउनु हो । जस्तै, मलटिपल न्युरोसिस, रियुमेटाईड, ग्याष्ट्रि कम्पलेन, अर्थराईटिस, मेन्सुयल डिसर्डर, थाईरायड, पोलिस्टिकऔँभरी डिजिज्, डायबिटिज्, हार्टडिजिज्, मेन्टल डिसअर्डर आदि ।
यस्ता रोगहरू धेरै बढेका छन् । एलर्जन या एलर्जी भनिएपनि यो एक किसिमको रोग हो । यो केही सीमित मानिसहरूलाई मात्र हुन्छ । सबैलाई त हुँदैन, किन यस्तो हुन्छ? यसको लागि हामीले आफैलाई नियालेर भित्र हेर्नु पर्छ । यदि हामी हाम्रो शरीरलाई विभाजन गर्ने हो भने, यसमा दुई भाग पाउँछौँ । शरीरको एक भाग देखिन्छ भने अर्को हिस्सा देखिँदैन । जो देखिन्छ त्यो ( स्थूल) बढी र जो देखिँदैन, त्यो हो दिमाग वा मन हो । यसले नै आफ्नो ऊर्जा, आफू भित्रको क्षमता, इच्छा, भावनालाई उत्पादन गर्दछ र यसको प्रतिक्रिया स्थूल शरीरमा देखिन्छ । बह्माण्डलाई नै हेर्दा पनि त्यही हो । एउटा पदार्थ र अर्को ऊर्जा छ । पदार्थ छ, त्यसमा हामी सबै छौँ, घर छ, जमिन छ । अर्कोतिर ऊर्जा छ, जो हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको छ । जसले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्दछ । त्यसैले यो स्थूल शरीरलाई सञ्चालन/बचाइरहेको छ । यी दुवै पदार्थ र ऊर्जा एकआपसमा सम्बन्धित छन् । आपसी तालमेल राख्छन् र सन्तुलनमा बस्छन् । शक्ति र भौतिक पदार्थको आपसी सन्तुलनमा रहनु नै स्वास्थ्य रहनु हो । यी दुबैबीचको असुन्तलन नै अस्वस्थ को कारण हो । हामी मानसिक रूपले होस् या शारीरिकले बिरामी हुन्छौँ ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १५:१५
के हो टेनिस एल्बो ?
मंसिर ९, २०७५ डा. ललितकुमार मिश्र
काठमाडौँ — के तपाईको हात दुख्ने, चियाको कप उठाउन नसक्ने, दुखाई कम भएको औषधि खाएपनि समस्या छ ? यदि छ भने तपाईलाई टेनिस एल्बो भएको हुन सक्छ ।
घरको काममा बिहानदेखि बेलुकीसम्म व्यस्त रहनेहरुमा हातको कुईनो दुखाइएको समस्या हुनसक्छ । हात र कुईनोको दुखाइ र यसका लक्षणले तपाईलाई टेनिस एल्बो नामक रोग लागेको हुन सक्छ ।
टेनिस एल्बो एक प्रकारको खतरानाक रोग हो । समयमा नै यसको उपचार गरिएन भने पछि यसले धेरै दु:ख दिन्छ । यो रोग लागेपछि हातले केही गर्न सकिदैन । चियाकप उठाएर चिया पिउन पनि गाह्रो हुन्छ । प्रभावित हातलाई हल्लाउँदा अत्यन्तै पीडा हुन्छ ।
सामान्यत: ३० देखि ५० वर्षका उमेर भएका व्यक्तिहरुमा यो रोग बढी देखिएको छ । कुनै समय चर्चित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर पनि टेनिस एल्बोबाट पीडित भएका थिए । गल्फ खेलाडीहरु यो रोगबाट पीडित भएको प्रशस्तै भेटिन्छ । प्राय:खेलाडीहरुमा देखिने टेनिस एल्बोको समस्या हिजोआज सामान्य मानिसहरुमा पनि देखिन थालेको छ । यो रोग हुनलाई खेलाडी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सबैलाइ हुनसक्छ ।
किन हुन्छ टेनिस एल्बो ?
कुईनोको हड्डी वा मांसपेशीमा आवश्यकताभन्दा बढी अतिरिक्त दबाब बारम्बार पर्न गयो भने टेनिस एल्बोको समस्या हुनसक्छ । टेनिस एल्बो त्यसबेला हुन्छ जब उ कुनै भारी काम गर्नलाई आफ्नो एउटै हातको व्ययभार सबभन्दा बढी हुने गर्दछ । समयमा नै उपचार गराइएन भने यो रोग खतरानाक हुन सक्छ ।
यो रोगमा कुनै एउटै हातको कुईनोबाट दर्द सुरु हुन्छ । विस्तारै यो दर्द पाखुरा र रिस्ट हुँदै पुरै हातमा फैलिन्छ । जसका कारणले हात उठाउन , हल्लाउन दिक्कत हुन्छ । हात का औँलाहरु पनि यस रोगबाट प्रभावित हुनसक्छन् । यसैगरी रिस्ट र हातकोबीच भाग पनि दुख्न थाल्छ । कहिलेकाही टेनिस एल्बो को दुखाई असहनीय हुन जान्छ र संवेदनशिलताका कारण कुईनो र रिस्ट सुन्निन पनि सक्छ ।
नियमित रुपमा व्यायाम वा हल्का स्ट्रैचिङ गर्नाले पनि यो रोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । दुखाई कम गर्न केही प्राकृतिक उपायहरु पनि छन् ।
बेसारको प्रयोग गर्ने: बेसारमा पाईने कुरकुमिन नामक तत्व एन्टिईन्फालामेटरी एजेन्ट र दर्द निवारकको रुपमा काम गर्दछ । यसबाहेक एन्टिआक्सिडेन्टको प्रचूर स्रोत बेसारमा हुनाले फ्री रेडिकल्सबाट लड्ने र उपचारमा समेत गति दिनमा यसले मद्दत गर्दछ । एक गिलास तातो दुधमा आधा चमच बेसार र अलिकति शुद्ध मह मिलाएर सप्ताह दिनमा दुईपटक पिउने । यसको सेवनले दुखाइ त कम हुन्छ नै साथै सुन्निएको पनि कम भएर जान्छ । । यसैप्रकार बरफले सेक्ने । यसबाट पनि दुखाई कम हुनुका साथै सुनिएको भाग पनि ठिक हुन्छ ।
टेनिस एल्बोबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो भने आफ्नो शक्ति र कार्य क्षमतालाई चिन्ने । यसै अनुसार काम गर्ने । काम गर्दा जोसका साथसाथै होस पनि राख्ने । सुरुको अवस्थामा बिरामीले आराम गर्नुका साथै औषधोपचारबाट निको हुनसक्छ । कदाचित निको भएन भने दुखाई र सुन्निएको मात्र कम भयो, केहि दिन पछि फेरि बल्झियो भने अपरेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टेनिस एल्बोको उपचारमा रोगीको मानसिक एवं शारिरिक अवस्था तथा रोगको कारणलाई मध्ये नजर राखेर लक्षण अनुसार निम्न लिखित औषधिहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आर्निका मोनटेना– ३० :शक्ति र कुहिनोमा चोटपटक लाग्नु या मसल्स तन्किनु,अत्याधिक एक्जर्शसनले कुहिनो दुख्नु । आदि लक्षणमा यसको प्रयोग लाभदायक हुन्छ ।
बेलाडोना–२०० : अत्यन्तै दुख्नु, कुहिनो सुन्निएको र रातो हुनु । यस अवस्थामा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ब्रयोनियास–३० : हातलाई अलिकति पनि हल्लाउँदा दुख्छ भने यो औषधिको सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
फेरम फाँस–३० : यदि पुरै हातमा दर्द छ भने यस औषधिको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसै गरी लक्षण अनुसार अन्य औषधिहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै: रक्सटाक्स, रुटा ग्रेभोलेन्स, सेंगुनेरियाकेन, सल्फर आदि ।
उपरोक्त औषधिहरुको प्रयोग आफ्नो निकटतम् कुनै होमियोप्याथिक चिकित्सकको सल्लाह लिई प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ १७:०७